Lufthansa Group dia miomana amin'ny fitomboan'ny fangatahana 2021 aorian'ny fatiantoka 5.5 miliara euro
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa Group dia miomana amin'ny fitomboan'ny fangatahana 2021 aorian'ny fatiantoka 5.5 miliara euro
Ny famerana ny dia sy ny quarantine dia nanjary fitotonganana tsy manam-paharoa amin'ny fangatahana dia an-dranomasina
Ny fihenan'ny vidiny dia vao haingana ary ny fandefasana vola dia voafetra manodidina ny 300 tapitrisa euro isam-bolana tamin'ny telovolana fahefatra
Carsten Spohr: "Ny fanamarinana iraisam-pirenena, ny vaksinin'ny nomerika ary ny taratasy fanamarinana fanandramana dia tokony hisolo toerana ny fandraràna ny fivezivezena sy ny quarantine"
Ny Lufthansa Group Airlines dia niomana ny hanolotra hatramin'ny 70 isan-jaton'ny fahafaha-miasa indray ao anatin'ny fotoana fohy ary mikendry ny hanomezana mpiasa 100,000 ho fomba fijery maharitra
Carsten Spohr, tale jeneralin'ny Deutsche Lufthansa AG, dia nilaza hoe: "Ny taona lasa no tena nisedra olana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny orinasanay - ho an'ny mpanjifantsika, ny mpiasa sy ny tompon-tany. Ny famerana ny dia sy ny quarantine dia nanjary fitotonganana tsy manam-paharoa amin'ny fangatahana dia an-dranomasina. Ankehitriny, eken'ny sehatra iraisam-pirenena, ny fanamarihana vaksiny nomerika sy ny fanamarinana fanandramana dia tokony hisolo ny fandràrana ny fitsangatsanganana sy ny quarantine mba hahafahan'ny olona mitsidika fianakaviana sy namana indray, mihaona amin'ireo mpiara-miasa na mianatra momba ny firenena sy ny kolontsaina hafa.
Mijery ny fivoaran'ny ho avy Vondrona Lufthansa, Carsten Spohr dia nilaza hoe: "Ny krizy tsy manam-paharoa dia manafaingana ny fizotry ny fanovana ao amin'ny orinasanay. 2021 dia ho taonan'ny fanavaozana sy fanavaozana ho antsika. Ny fifantohana dia hijanona amin'ny faharetana: Izahay dia mandinika raha ny fiaramanidina rehetra mihoatra ny 25 taona dia hijanona amin'ny tany maharitra mandrakizay. Manomboka amin'ny fahavaratra dia manantena izahay fa handray indray ny fangatahana raha vantany vao mihena ny fetra famerana ny dia amin'ny alàlan'ny fitsapana sy vaksinina fanampiny. Vonona izahay hanolotra hatramin'ny 70 isan-jaton'ny fahafaha-miatrika ny krizy indray ao anatin'ny fotoana fohy raha mitombo ny fangatahana. Miaraka amin'ny Vondrona Lufthansa kely kokoa, mailaka kokoa ary maharitra, izahay dia te hihazona ny toerana laharanay manerantany ary hiantoka ny asan'ireo mpiasa manodidina ny 100,000 amin'ny fotoana maharitra. ”
Nihena be ny fangatahana tamin'ny taona niandohan'ny areti-mandringana Corona sy ny fameperana ny dia. Ny fidiram-bola tao amin'ny Vondrona Lufthansa dia nidina hatramin'ny 13.6 miliara euro tamin'ny taona 2020 (taona lasa: 36.4 miliara euro). Na eo aza ny fihenam-bidy haingana sy be dia be, ny Lufthansa Group dia tsy maintsy nitatitra ny EBIT Adimied minus 5.5 miliara euro (taona lasa: tombony 2.0 miliara euro). Ny marindrano EBIT namboarina dia nihena 40.1 isan-jato (tamin'ny taona lasa: miampy 5.6 isan-jato). Ny fantsom-bola miasa amin'ny telovolana fahefatra amin'ny taona 2020 dia manodidina ny 300 tapitrisa euro isam-bolana. Ny fandrosoana amin'ny famerenana amin'ny laoniny dia nametra ny fiantraikan'ny toe-javatra mihombo amin'ny aretina. Ny vidin'ny mpiasa dia nihena be tamin'ny alàlan'ny fihenan'ny mpiasa, ny fifanarahana momba ny krizy miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka sosialy ary ny asa fohy. Tamin'ny faran'ny taona 2020, ny isan'ny mpiasa dia 110,000, manodidina ny 20 isan-jato ambany noho ny tamin'ny taona lasa. Ny fahaverezan'ny EBIT voalaza dia manodidina ny 1.9 miliara euro ambany amin'ny minus 7.4 miliara euro, indrindra noho ny fihenan'ny fiaran'ny fiaramanidina sy ny fanasoavana. Ny vola miditra dia nitentina 6.7 ​​miliara euro (taona lasa: 1.2 miliara euro).
Lufthansa Cargo dia nahatratra valiny firaketana
Mifanohitra amin'ny kaompaniam-pitaterana mpandeha, ny fizarana entan'ny Vondrona dia nahazo tombony tamin'ny fiakaran'ny fangatahana nandritra ny taona. Nahazo valisoa tamin'ny fiakarana avo lenta ny vokatra eo ho eo noho ny fangatahana avo tsy tapaka, nahazo valiny i Lufthansa Cargo tamin'ny alàlan'ny EBIT AdjUST 772 tapitrisa euro (taona lasa: 1 tapitrisa euro) na dia teo aza ny fihenan'ny 36 isan-jaton'ny fahaiza-mitondra.
Ny fandaniana renivohitra tao amin'ny Vondrona Lufthansa dia nihena sahabo ho roa ampahatelon'ny taona tamin'ny taona 2020 ho 1.3 miliara euro (taona lasa: 3.6 miliara euro), indrindra tamin'ny fifanarahana marobe tamin'ireo mpanamboatra fiaramanidina. Ireo dia manome ny fanemorana ny fandefasana fiaramanidina amin'ny 2021 sy ny sisa, ka ny fandaniambola isan-taona dia ho ambany noho ny nomanina tamin'ny taona ho avy koa. Ny fikorianan'ny vola maimaim-poana namboarina dia mitentina 3.7 miliara euro (taona lasa: 203 tapitrisa Euros), miaraka amin'ny 3.9 miliara euro no voaloa ho an'ny famerenam-bola fotsiny. Nampihena 1.9 miliara euro izany tamin'ny famandrihana vaovao. Ny vola mivoaka sisa tavela dia noferan'ny fitantanana henjana ny trosa sy ny trosa.
Ny trosa marobe, ao anatin'izany ny trosa arahin'antoka fampanofana dia nitombo manodidina ny 9.9 miliara euro (taona lasa: 6.7 miliara euro). Ny trosa fisotroan-dronono dia nitombo 43 isan-jato ka hatramin'ny 9.5 miliara euro (tamin'ny taona lasa: 6.7 miliara euro), indrindra noho ny fihenan'ny zana-bola ampaham-bidy hatramin'ny 0.8 isan-jato (taona lasa: 1.4 isan-jato).
Tamin'ny 31 desambra 2020, ny vondrona Lufthansa dia nahazo vola mitentina manodidina ny 10.6 miliara euro, izay 5.7 miliara euro izay misy ifandraisany amin'ny fepetra fampiorenana ny governemanta. Tamin'ny faran'ny taona 2020, ny Vondrona Lufthansa dia nanangona vola mitentina 3.3 miliara euro ho an'ny governemanta, izay 1 miliara euro no efa voaloa mandritra izany.
Tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona 2020, niverina soa aman-tsara ny tsena ny renivohitra ary nanangona vola mitentina 2.1 miliara euro tamin'ny alàlan'ny fifamatorana sy famatsiam-bola ho an'ny fiaramanidina. Ankoatr'izay, ny 4 febroary dia nametraka fifamatorana roa miaraka amin'ny totalin'ny vola 1.6 miliara euro ny Vondrona, ny vola azo dia nampiasaina niaraka tamin'ny zavatra hafa mba hamerenana ny trosa KWW 1 miliara euro. Amin'ny ankapobeny, ny famerenam-bola maharitra amin'ny trosa rehetra amin'ny 2021 dia azo antoka.
“Ny fifanakalozana farany dia nampiseho ny fahatokisan'ny tsena ny orinasanay. Ny Vondrona Lufthansa dia mamatsy ara-bola mihoatra ny 2021. Izy io koa dia manampy amin'ny alàlan'ny singa tsy niasa tamin'ny fonosana fanamafisana, izay azontsika raisina araka izay ilaina mba hanamafisana kokoa ny taratasy fifandanjana, "hoy i Remco Steenbergen, Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG.
Tarehimarika fifamoivoizana ho an'ny taona 2020
Tamin'ny taona 2020, ny kaompaniam-pitaterana an'ny Vondrona Lufthansa dia nanolotra manodidina ny ampahatelon'ny sidina na fahaiza-manao (kilometatra azo alefa) 31 isan-jato raha oharina tamin'ny taona lasa. Tamin'ny 36.4 tapitrisa, ny isan'ireo mpandeha dia 25 isan-jaton'ny tarehin-javatra tamin'ny taon-dasa, ka nahatonga ny isan'ny entana 63 isan-jato, 19.3 isa isan-jato ambany noho ny tamin'ny taona lasa.
Noho ny fanafoanana ny fahafaha-mitondra kibo amin'ny fiaramanidina mpandeha dia nihena 39 isan-jato ny fahaizan'ny entana. Ny kilometatra fandefasana entana dia nidina 31 isan-jato hatramin'ny 7,390 tapitrisa metric taonina tamin'ny vanim-potoana mitovy. Mandritra izany fotoana izany dia nisondrotra 8.4 isan-jato ny isan'ny entana ka 69.7 isan-jato. Niakatra 55 isan-jato ny vokatra antonony noho ny tsy fahampian'ny famatsiana.
Ny Vondrona Lufthansa dia nahazo tombony tamin'ny rafitra hub. Tsy toy ny mpifaninana, izay tsy manome afa-tsy fifandraisana akaiky, ny seranam-piaramanidina Lufthansa Group dia nahavita namory ny habetsahan'ny fifamoivoizana ambany tao amin'ny hubs ary nitazona fifandraisana manan-danja. Ho fanampin'izany, ny tambajotra akaiky eo amin'ny fifamoivoizana sy ny fivezivezena amin'ny mpandeha dia nahatonga izany hiarovana ny rojom-pamokarana eran-tany.
Tamin'ny taon-dasa, nihena 28,000 ny isan'ireo mpiasa. Any Alemana, asa 10,000 fanampiny no hahena na ny vola ilaina amin'ny mpiasa mifanaraka amin'izany dia tsy maintsy averina. Ny fiaramanidina Vondrona dia hahena ho lasa fiaramanidina 650 amin'ny 2023. Amin'ny tapaky ny folo taona, manantena ny Vondrona hiverina amin'ny 90 isan-jato ny haavon'ny fahaiza-manao. Ho fanampin'izany, ny vondrona dia mandinika ny fanilihana ireo zana-kazo tsy misy afa-tsy synergie kely ihany miaraka amin'ny orinasa fototra.
Isaky ny esorina ny fameperana dia mihombo hatrany ny famandrihana ao amin'ny faritry ny fifamoivoizana. Ho an'ny taona 2021 feno, ny Vondrona dia manantena ny fahaizan'ny tolotra hitombo hatramin'ny 40 ka hatramin'ny 50 isanjaton'ny ambaratonga 2019, ary ny fanantenana dia mijanona fa hiteraka fikorianam-bola miabo tsara raha toa ka mihoatra ny 50 isan-jato ny fahaizana atolotra. Miaraka amin'ny fanitarana stratejika ny orinasam-pizahan-tany sy ny karatra Lufthansa Cargo matanjaka hatrany, ny Vondrona dia afaka manararaotra ireo fotoana mety amin'ny tsena ao anatin'ny fotoana fohy. Mitohy ny firoboroboan'ny sehatry ny entana.
Ny salan'isan'ny fividianana vola isam-bolana, tsy misy ny fanovana ny renivola miasa, ny fandaniambola ary ny fandaniam-bola iraisana ary ny famerenana amin'ny laoniny dia heverina fa voafetra ho 300 tapitrisa euro amin'ny telovolana voalohany amin'ny 2021.
“Noho ireo fepetra ara-bola farany nataonay farany teo, dia manana vola ampy hikirakirana ny tontolon'ny tsena izay mbola sarotra. Ny dingana manaraka dia ny fanamafisana ny fifandanjana sy ny fihenan'ny trosa. Amin'izany dia hampihena ny vidin-tsika amin'ny alàlan'ny fandaminana indray. Ny krizy sy ny fitantanana ny vidiny dia nandaitra haingana kokoa noho ny nomanina tany am-boalohany. Mandritra izany fotoana izany dia niarina tsimoramora kokoa ny orinasantsika noho ny nantenainay tany am-boalohany. Ankoatry ny famerenana ny volan'ny governemanta hampiorina azy ireo, ny tanjon'ity paikadinay ara-bola ity dia ny hijeren'ireo tsenan-bola ara-bola ny fahafaham-po ananantsika ho an'ny taha fampiasam-bola mandritra ny fotoana fohy ”, hoy i Remco Steenbergen.
Ny Vondrona Lufthansa dia manantena ny fatiantoka miasa, refesina amin'ny resaka AdBied EBIT, dia ho ambany kokoa amin'ny 2021 noho ny tamin'ny taona lasa.
Fitsangatsanganana any Etazonia: 12% -n'ny Amerikanina ihany no mikasa ny hitsangatsangana amin'ny lohataona
PATA dia manonona ny 2021 Face of the Future